ZTE ONU Vagadziri | China ZTE ONU Fekitori & Vatengesi
Iyo EchoLife HG8546M, yeinternet network terminal (ONT), iri yepamusoro-yekupedzisira imba suo muHuawei FTTH mhinduro. Nekushandisa iyo GPON tekinoroji, ye-Ultra-Broadband kuwana inopihwa kune vashandisi vepamba uye veSOHO. IH8546M inopa 1 * POTS ports, 1 * GE + 3FE auto-adapting Ethernet chiteshi, uye 2 * Wi-Fi chiteshi. IH8546M inoratidzira ekumusoro-mashandiro ekuendesa mberi kugona kuve nechokwadi chakanakisa chiitiko neVoIP, Internet uye HD vhidhiyo masevhisi. Naizvozvo, iyo H8546M inopa yakakwana terminal mhinduro uye neramangwana rinotungamirwa sevhisi inotsigira kugona kweFTTH kutumirwa.
ZTE F660 V5.2 International Shanduro ONT
ZTE ZXHN F660 V5.2 FTTH ndeye GPON Optical Network Terminal yakagadzirirwa FTTH mamiriro. Inopa vanyoreri vakapfuma, vane mavara, vakasarudzika, vakasununguka uye vakasununguka katatu-kutamba masevhisi anosanganisira izwi, vhidhiyo (IPTV / CATV) uye yakakwira-mhanya internet mukana. inotsigira pakumisikidza desktop, kumisikidza kumisikidza uye network kabhoni kukwira. Iyi modhi yakagadzirirwa zviitiko zveFTTH. Iine tekinoroji yaro yepamba, ZTE F609 FTTH inomiririra nyowani-chizvarwa imba network inosangana nezvinodiwa zvizere-zvevashandisi vekumusoro nekuburitsa inomhanya-mhanya Internet, izwi repamusoro-soro uye vhidhiyo (IPTV), yakavimbika isina waya kuwana uye inyore network yekuchengetedza masevhisi.
ZTE F660 V6.0 GPON ONU 1GE + 3FE + HOTI + WIFI
Iyo F660 V6.0 inopa 1 POT ports, 1GE uye 3FE auto-adapting Ethernet chiteshi, imwe USB chiteshi, uye imwe yeWi-Fi chiteshi. Nekushandisa iyo GPON tekinoroji, ye-Ultra-Broadband kuwana inopihwa kune vashandisi vepamba uye veSOHO. Iyo F660 inoratidzira yakakwira-yekuita yekuendesa mberi kugona kuve nechokwadi chakanakisa chiitiko neVoIP, Internet uye HD vhidhiyo masevhisi.
ZTE ONU F660 v8.0 1GE + 3FE + HOTI + USB + WiFi (5dibi)
ZTE GPON ONU ZXA10 F660 Shanduro 8.0 FTTO kana FTTH ONT ine 1GE + 3FE + 1POTS + USB + WIFI.
Chirungu Firmware, Chirungu QIG, Chirungu LED mucherechedzo, Tsigira SIP VOIP protocol, Na
DHCP basa, Tsigira vashandisi vazhinji.
ZXA10 F660 ndeye GPON Optical Network Terminal yakagadzirirwa HGU (Kumba Kwemba Gateway)
inoshandiswa muFTTH mamiriro, ayo anotsigira L3 basa kubatsira mubatsiri kuvaka imba yakangwara
network. Inopa munhu anonyorera aine hupfumi, ane mavara, akasarudzika, ari nyore uye akasununguka
katatu-kutamba masevhisi anosanganisira izwi, vhidhiyo (IPTV) uye yekumhanyisa internet kuwana. Izvo zvakare
inotsigira IEEE 802.11b / g / n iyo inobvumidza munhu kunyorera kunakirwa neinternet kuburikidza newifi. Ine diki,
Kuonekwa kwakangwara uye girini, simba-rinoponesa mukana. Uchishandisa OMCI protocol, O&M mutengo
inogona kuderedzwa zvinobudirira nekutsigira kure sevhisi kupihwa, akangwara kukanganisa kuongororwa
uye mashandiro emabasa.
1.Plug-uye-play (PnP): Indaneti, IPTV uye VoIP masevhisi anogona kutumirwa nekudzvanya kamwe chete paNMS uye pa-saiti kumisikidzwa hazvidiwe.
2.Remote kuongororwa: Remote kukanganisa kutsvaga kunoitwa neiyo loop-mutsara bvunzo yePOTS zviteshi, kufona kushevedzera uye PPPoE dialup kutevedzera kwakatangwa neNMS.
3.Link yekutarisa: E2E yekubatanidza yekubatanidza kunoitwa uchishandisa 802.1ag Ethernet OAM.
4.High kumhanyisa kufambisira mberi: GE mutsetse chiyero chekutumira mune yekukwidza mamiriro uye 900 Mbit / s kutumira mune iyo NAT mamiriro.
5.Green simba-yekuchengetedza: 25% simba rekushandisa rinochengetedzwa neakaomesesa system pane chipset (SOC) mhinduro, umo, imwe chip inobatanidza nePON, izwi, gedhi uye LSW module.
ZTE gpon ont F663NV3A GPON ONT akateedzana zvigadzirwa zvinogadzirwa uye zvakagadzirwa nekambani yekambani, inova mutungamiri muFTTH / FTTO Broadband access network network. Ivo anokwanisa kudzora akawedzerwa nezvakadai senge yakakwira-bandwidth, yakanyanya kuvimbika, yakaderera simba kushandiswa uye kugutsa vashandisi chinodikanwa kuti uwane Broadband, izwi, data uye vhidhiyo nezvimwe.
ZTE GPON ONU F663NV3A ine 1GE + 3FEports + 1 * chiteshi chefoni + wifi, ine 2 antennas yakakwira kuwana isina waya
ZTE ZXHN F660 V5 GPON ONU NE 4FE + 2POTS + WIFI yeRouter ZTE F660 ndeye GPON Optical Network Terminal yakagadzirirwa FTTH mamiriro. Iyo inotsigira L3 basa kubatsira mubatsiri kuvaka akangwara epamba network.
Inopa zvakapfuma, zvine mavara, zvakasarudzika, zviri nyore uye nemasevhisi masevhisi anosanganisira izwi, vhidhiyo (IPTV) uye yekumhanyisa internet kuwana.
Iyo ZXHN F670L iri ITU-T G.984 uye ITU-T G.988 inoenderana optical network terminal (ONT) iyo yakagadzirirwa vashandisi vekumusoro-kumba. kuwedzera.
Padivi re network, inotsigira 2.488 Gbps pasi uye 1.244 Gbps uplink. Padivi remushandisi, inopa zvina GE zviteshi, imwe HOTI
zviteshi, imwe USB 2.0 chiteshi, uye Wi-Fi 802.11n 2 × 2 2.4GHz & 802.11ac 3 × 3 5GHz panguva imwe chete. Nekushandisa iyo ZXHN F670, vashandisi vekumba vanogona
pinda data, vhidhiyo nezwi masevhisi, uye unakirwe yakakwira-mhanya internet kubatana.
Huawei Olt Mutengo, Optical Fiber Module, Huawei Qsfp +, Sfp C ++, External Modulation Transmitter, Xfp Transceiver,